नेविसंघको सिटिईभीटिमा कर्ण ओली
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ सिटिईभीटिको राष्टिय भेलाले नया नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । बुधबार राजधानीको सिटिइभीटि अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पस बालाजुु स्कूूल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी भएको भेलाले सिटिईभीटि केन्द्रिय समन्वय समितिमा कर्ण ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिदै सम्पन्न भएको हो । यस्तै समितिको सचिबमा मधुसुदन...
हारपछि कांग्रेसमा बहस : देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रोसँग हार बेहोरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अदूरदर्शिताकै कारण पार्टीले पराजय बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका छन् भने...
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्री र अर्कोलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर एकता हुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘दुवै पार्टीका नेताहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एउटालाई प्रधानमन्त्री र अर्कोलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकता हुन्छ,’ रावलले सोमबार रिपोर्टस क्लबमा भने।...
पार्टी एकता गर्दा सम्मानजनक पद पाउँनुपर्ने
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टी एकता गर्दा आपसमा पद बाँडफाँडमा सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । चुनावपछि पार्टी एकता गर्नेगरी एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । चुनावमा साझा उम्मेदवार तय गरेका दुई...
गगन थापाले भने, ‘काङ्ग्रेसलाई ठूलो दुर्घटना’
मकवानपुर । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका काङ्ग्रेस उम्मेदवार गगनकुमार थापाले अब काङ्ग्रेस पुरानै ढर्राबाट चल्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । पत्रकारसंग छोटो कुराकानी गर्दै चुनावी परिणामका विषयमा यसै भनिहाल्ने अवस्था नभएपनि चुनावी परिणाम काङ्ग्रेसका लागि निकै ठूलो दुर्घटना भएको बताए । उनले आफूलाई मतदान गर्ने...
रविन्द्र मिश्रको यो महानता !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काठमाडौं १ मा विवेकशील साझाका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । १०, ११८ मत पा एका मिश्र कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग ८१९ मतले पराजित भएका छन् । अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि मिश्रले कांग्रेस नेता सिंहलाई फोन गरेर नै बधाइ दिएका छन् । साथै उनले आफ्नो पार्टीका मतदाताहरुले...
यस्तो छ अहिलेसम्मको परिणाम, कसको कहाँ जित ?
दोस्रो चरणको चुनाव सकिएपछि मुलुकमा धमाधम मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले विहान देशका विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बाम गठबन्धनले अग्रता लिइरहेको छ । समाचार तयार पार्दासम्म वाम गठबन्धनले सर्वाधिक प्रतिनिधि सभामा २० र प्रदेश सभामा २९ स्थानमा विजय हासिल गरिसकेका छन्। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३ र प्रदेशसभामा ३ स्थानमा...
चितवनमा प्रचण्ड पछि परे, विक्रम अघि लागे
चितवन । अनलाइनखबर डटकमका अनुसार चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड पछाडि परेका छन् । सुरुवातमा प्रचण्डले झिनो अग्रता लिएका थिए । पछिल्लो परिणाामअनुसार उनी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राप्रपा प्रजातान्त्रिककका नेता विक्रम पाण्डेभन्दा १४५ मतले पछि छन् ।...
मकवानपुरको यस्तो छ ताजा परिणाम
मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेस सभाका प्रत्यक्ष तर्फका प्रत्यासिहरुको मत परिणाम : प्रतिनिधि सभा -१,कृष्णप्रसाद दाहाल (वाम गठवन्धन) - १११६ कमल थापा (लोकतान्त्रिक गठवन्धन) - १३३८ प्रतिनिधि सभा -२,बिरोध खतिवडा (वाम गठवन्धन) - १२२६ डिना उपाध्यय (लोकतान्त्रिक गठवन्धन) - ५०७ प्रदेश सभा -१(क),प्रेमबहादुर पुलामी (वाम) - १४४९ धर्मराज...